SUChat: Izi ozi ozioma doro anya | Site na Linux
Ingga n'ihu n'usoro isiokwu anyị metụtara weebụsaịtị na-atọ ụtọ ma bara uru maka Obodo Onye Ọrụ na Free Software, Mepee Isi mmalite na GNU / Linux, na ndị na-eche banyere ha nzuzo, anonymity y Nchebe Cyber Na mkpokọta, taa anyị ga-ekwu maka websaịtị akpọrọ SUChat.
SUChat bụ bara uru obere website na awade a ọrụ izipu ozi ọha na eze na-ezighi ezi dabere na usoro XMPP, nke na-asọpụrụ nzuzo nke ndị ọrụ na na-enye ohere nkwukọrịta n’otu oge n’etiti ndị niile so na ya.
Tupu ịbanye n'ụzọ zuru ezu ikwu na weebụsaịtị nke SUChat, Okwesiri ighota na n’oge ndi ozo anyi ekwuola okwu banyere saiti ndi ozo yiri ya NoGAFAM na Nzuzo, nke anyị na-akọwa nkenke na ederede ndị ahụ dị ka ndị a:
"NoGAFAM bụ webụsaịtị na-abụghị naanị na - akwalite sọftụwia efu, kamakwa na - akpali ndị ọzọ ịmara uru data sitere na ịntanetị dị, yana ihe egwu ha na - agba mgbe ha na - eji nyiwe, ngwa na ọrụ nke ọtụtụ ndị Teknụzụ ụwa, ọtụtụ n'ime ha ka amara dị ka GAFAM". NoGAFAM: Weebụsaịtị na-atọ ụtọ na ngagharị maka sọftụwia efu
"Privacytools bụ ebe nrụọrụ weebụ na-enye ihe ọmụma na ngwaọrụ iji kpuchido nzuzo gị megide nsuso onye ọrụ ụwa. Anyị na-eme ka ndị na-eche echiche nzuzo dị ka gị iji kwurịta ma mụta banyere ọganihu ọhụrụ na ichebe data gị n'ịntanetị. Weebụsaịtị a bụ ebe etiti nzukọ anyị, ebe anyị nyocha ma kwado ihe ngwanrọ dị iche iche maka obodo anyị." NzuzoTools: Ebe nrụọrụ weebụ bara uru ma baa uru maka nzuzo n'ịntanetị
1 SuChat: Ozi ngwa ngwa dabere na usoro XMPP
1.1 Kedu ihe bụ SuChat?
1.2 Njirimara saịtị na ọrụ ọha
1.3 Mmekọrịta na ngwa na-emeghe ma na-emeghe
1.5 Nye onyinye na SUChat
SuChat: Ozi ngwa ngwa dabere na usoro XMPP
Kedu ihe bụ SuChat?
Dị ka gị onwe gị si kwuo ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, a kọwara ya dị ka ndị a:
"SUChat.org bụ ozi izipu ozi ọha na eze na-ezighi ezi dabere na usoro XMPP, nke na-asọpụrụ nzuzo gị ma na-enye ezigbo nkwukọrịta gị na ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị na-enweghị nsogbu gbasara nchekwa na nzuzo. Mepụta akaụntụ, budata onye ahịa na-akwado Jabber / XMPP, tinye ndị enyi ma kwurịta okwu na nchekwa zuru oke."
Njirimara saịtị na ọrụ ọha
Nche: All njikọ sava na-ezoro ezo site na iji naanị ike izo ya ezo ogbugba ndu na algọridim. A naghị echekwa okwuntughe na nchekwa data, a na-eji usoro SCRAM.
Ndabere: Otu ugboro n'ụbọchị, a na-arụ ọrụ nkwado ndabere nke data niile. Sava a kwadebere n'ụzọ zuru ezu bụrụ na nke ọdịda ma ọ bụ ndị ọzọ ọrụaka nsogbu.
Arụ ọrụ: Servers na-enye ọhụụ ọhụụ, dịka nchekwa spam, MAM, HTTP faịlụ bulite. A na-echebe ha megide mwakpo DDoS ma nwee nkwado maka protocol IPv6.
Cheta na: Ọrụ SUChat ọha na eze bụ n'efu nke ụyọkọ sava ya abụọ, maka ịkekọrịta ibu ma melite nkwụsi ike. N'ọnọdụ nke otu n'ime sava ahụ, usoro ahụ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ.
Mmekọrịta na ngwa na-emeghe ma na-emeghe
Maka ndị anyị kpebiri iji wee kwuo free ọha ọrụ, ndị nchịkwa nke otu akụkọ ndị ọrụ nwere ike iji free na-emeghe nzi ozi ahịa na-eso, ma ọ bụrụ na ị chọghị ma ọ bụ nwee ike iji ikpo okwu weebụ ozugbo:
Nye onyinye na SUChat
Cheta na free ọrụ ọha na eze nke SUChat na-agụnye ọ dịghị atọ mgbasa ozi na ọ dịghị onye ọrụ nsuso. Agbanyeghị, ọ masịrị ha free, oghe na free oru ngo ha chọrọ ego iji kwado otu akụ. Yabụ ọ bụrụ n'iji ọrụ n'efu ma ọ bụ chọọ ịkwado ha, ị nwere ike ime ya site na ndị a njikọ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata websaịtị ọzọ yiri ya, anyị na-akwado gị inyocha ihe ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «SUChat.org», obere ebe nrụọrụ weebụ bara uru nke na-enye a ọrụ izipu ozi ọha na eze na-ezighi ezi dabere na usoro XMPP, nke na-asọpụrụ nzuzo nke ndị ọrụ na -enye ezigbo oge nkwurịta okwu n'etiti onye ọ bụla; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » ọtụtụ » SUChat: Izi ozi ezighi ezi banyere ọha na eze